Isithambisi esihle kakhulu sabesilisa | Amadoda aSitayela
Kwabaningi Ukhilimu othambisa ubuso bendoda usuvele waba yinto ejwayelekile. Ibalulekile ezikhwameni eziningi zezindlu zangasese futhi akuyona into engaphansi, impela ngokuhamba kwesikhathi iyakhombisa futhi siyabona ukuthi ukunakekelwa kuguquka kanjani. Ukunwebeka kwesikhumba yingxenye eyisisekelo yalolu hlobo lokunakekelwa.
Ukuhlanza isikhumba kahle nokufaka amafutha okuthambisa amahle yizinyathelo ezibalulekile zoku bonisa isikhumba esikhulu ebusweni bakho. Kepha hhayi noma yimuphi ukhilimu osebenzayo, siyazi ukuthi kunokhilimu abaningi emakethe abanezici ezingabizi kakhulu ngohlobo ngalunye lwesikhumba.
Khumbula ukuthi isikhumba sabesilisa kufanele inakekelwe ngokwehlukile kowesifazane. Ngalokhu, kufanele kuchazwe ukuthi ukhilimu wowesifazane ngeke usebenze kakhulu, ngoba isikhumba sowesilisa sikhulu futhi sinamafutha futhi sizodinga i-hydration ehlukile. Uma kungasetshenziswanga ukhilimu ofanele kunengozi yokuba bomvu, ukuqina, ukoma noma isikhumba esinamafutha ngokweqile.
1 Ungayikhetha kanjani i-moisturizer enhle kakhulu?
2 Izincomo zokuthi ungasebenzisa kanjani amafutha okuthambisa ebusweni
3 Isithambisi esihle kakhulu sabesilisa
3.1 I-Baebody Retinol Amafutha
3.2 I-Biotherm Aquapower
3.3 Inja yeBull Cream Cream
3.4 IShisheido Hydro Master Gel
3.5 Uhlelo lweDior Homme Dermo
Ungayikhetha kanjani i-moisturizer enhle kakhulu?
Kukhona lokho hlola ukuthi iyiphi i- uhlobo lwesikhumba ebusweni ukufaka ukhilimu ofanele. Isikhumba esinamafutha ngeke silandele ukwelashwa okufanayo nesikhumba esomile noma esihlanganisiwe, yingakho isithambisi esihle kunazo zonke yiso esilingana kahle nohlobo lwesikhumba sakho.
Ngokwesikhumba esinamafutha kunconywa ukusetshenziswa kokhilimu omncane ngaphandle kwamafutha amaningi, kepha kunikeza umuzwa wokungabi nasisindo nokuthi lapho kufakwa lowo muzwa wokuqabuka.
Ngesikhumba esomile, kuzodingeka izakhi eziningi ngaphandle kwezinto ezinamafutha ukulinganisa isikhumba. Lawa makhilimu kumele aqukethe ama-antioxidants nezinto zokulwa nokuguga. Ithiphu eyodwa ukusebenzisa okhilimu abadonsa ngokushesha abangakuniki umuzwa wamafutha ngemuva kokufaka isicelo.
Ngesikhumba esihlanganisiwe kuzodingeka ukhilimu ophakathi nendawoLawa makhilimu kumele abe namandla okufaka izindawo ezinamafutha nezomile ngendlela efanayo. Kuzofanele kube ukhilimu okhanyayo, onomuzwa ofana nomsizi.
Izincomo zokuthi ungasebenzisa kanjani amafutha okuthambisa ebusweni
Uma usukhombe uhlobo lwesikhumba sakho futhi usuthenge ukhilimu ofanele, kufanele wazi ukuthi kufanele ulandele inqubo yansuku zonke futhi gcoba ukhilimu ekuseni nasebusuku. Kufanele uhlanze kahle isikhumba ngaphambi kokufaka ukhilimu ebusweni, ungafunda kabanzi ngokunakekelwa kobuso ku lesi sixhumanisi Uma usugundile kufanele wazi ukuthi ukhilimu kumele usetshenziswe ngemuva kwalokho, kuzosiza futhi ekunciphiseni umuzwa ovuthayo nobomvu.
Sinezinto ezinhlobonhlobo zemikhiqizo yobuso. Kungumkhiqizo owandayo, njengoba amadoda esezifaka ngokwengeziwe ekusetshenzisweni kwezinto abazinakekelayo.
I-Baebody Retinol Amafutha
Kungumkhiqizo ngemiphumela emihle kakhulu futhi omunye wabathengisi abakhulu. It is a moisturizer esiza ukuvimbela ukubonakala kwemibimbi, bushelelezi imigqa emihle, ukushintsha kombala kanye ne-hyperpigmentation. Iqukethe i-Vitamin A noma i-Retinol ezosiza ukuvuselela amangqamuzana esikhumba afile futhi ayenze ibukeke iheha kakhulu. Ukuze uthole imiphumela emihle, ingasetshenziswa ekuseni nasebusuku.
Kuyinto ijeli enamandla kakhulu yokuthambisa enokuthungwa okumnandi ngaphandle kokwengeza isisindo esikhunjeni sakho. Ngenye yalezo okhilimu owathandayo ngoba zimuncwa ngokushesha, zintsha futhi zishiya isikhumba sithambile futhi sinethezekile usuku lonke. Ihlanganiswe ne-Thermal Plankton nezakhi zokulandela ezishisayo ezivumelana nazo zonke izinhlobo zesikhumba sowesilisa.
Inja yeBull Cream Cream
Ukhilimu lo Yenzelwe zonke izinhlobo zesikhumba samadoda. Iqukethe izithako zemvelo: i-Aloe Vera, iCamellia Oil kanye netiye eluhlaza. Iphunga layo liyisibonga esihle kumafutha aso abalulekile ayi-8 alinika ukuthinta kwesilisa. Inikeza ukuthambisa okukhulu, ukuthamba kanye nokuqabuka kwesikhumba. Kunconywa ukuthi uyisebenzise ekuseni nasebusuku, ebusweni nasentanyeni.
IShisheido Hydro Master Gel
Lesi simonyo sikulungele ukuqukatha ukhilimu onokuthungwa kwejel okuthandwa ukumuncwa kwawo ngokushesha. Kungabonakala ukuthi isikhumba sikunciphisa kanjani ukoma ngaso leso sikhathi nokuthi ukuthuthuka kwaso kuthuthuka kanjani. Isakhiwo sayo Sokuvikela sigqamile, esilwa nezimpawu zokuguga.
Uhlelo lweDior Homme Dermo
Le khilimu iyi-emulsion ewuketshezi leyo ingena ngokushesha esikhunjeni futhi isingenise ngokujulile. Iqukethe isithako esisebenzayo esine-biofermented sokugcina ibhalansi yezimbali zesikhumba ezizosiza ukugcina impilo enhle yesikhumba sobuso. Esinye isithako esibalulekile yi-Vitamin E yayo ukuyivikela ekuhlaselweni imvelo.
Cishe wonke okhilimu aklanyelwe zonke izinhlobo zesikhumba futhi asize ngezinga elincane noma elikhudlwana ukufuthisa isikhumba kanye nokuvikela ukoma kwaso. Kunemikhiqizo eminingi etholakala kumakhasimende emakethe futhi njengamanje konke kuqukethe izithako zemvelo zomphumela omuhle. Ungakhohlwa ukuthi ukuze unakekele isikhumba sakho kahle kufanele uthambise i-sunscreen, ngoba uzoyivimba ukuthi ingajeziswa ngaphezu kokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Isithambisi esihle kakhulu sabesilisa